मियाजिमा टापुमा यी कुरा गरेर जापानको गर्मि छल्नुहोस् . | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > Hiroshima > मियाजिमा टापुमा यी कुरा गरेर जापानको गर्मि छल्नुहोस् .
हजुरले इन्टरनेटमा जापानको ठाउहरु खोज्दा पक्कै पनि तलको चित्र देख्नु भएको होला। यो चित्रमा एउटा ठूलो जापानी गेट जसलाई तोरी भनिन्छ, समुद्रमा रहेको छ। झट्ट हेर्दा मानिसहरुलाई यो चित्र साचिकैको हैन जस्तो लाग्दछ। तर यो साचिकै हो। हजुरले यो “तोरी” गेट जापानको हिरोशिमाको दक्षिनि कोस्टमा रहेको मियाजिमा टापुमा देख्न सक्नु हुनेछ।
यदि हजुर मियाजामी यहि गेट हर्न आउन लाग्नु भएको हो भने दुर्भाग्यवस अहिले यो गेटको रेनोभेसन चलिरहेको छ। यो रेनोभेसन, गेटको खुईलिदै गएको रंगलाई पहिले जस्तै बनाउन थालिएको हो। हजुरले यो भब्य गेट देख्न नपाए पनि मियाजिमा टापुमा गर्न सकिने अन्य केहि रमाईला कुराहरु आज हजुरलाई बताउनेछु। यी कुराहरु हजुरले “सेतो इन्न्ल्यांड समुद्र” डुंगा वा फेरी बाट ओर्लेर केहि मिनेटको हिडाईको दुरीमा गर्न वा पाउन सक्नु हुनेछ।
मियाजिमा टापुका मृग संग घुलमिल हुनुहोस
“फेरी” स्टेसनबाट ओर्लिने बित्तिकै हजुरले गर्न सक्ने यो रमाइलो कुरा हो। यो टापु छिर्ने बित्तिकै हजुरले केहि मृगहरु भेट्नु हुनेछ। यहाँको लोकल सरकारले यो टापुको प्रेजर्भेसनको लागि भनेर यी स्थानिय सिका मृगलाई यो टापुमा जता ततै घुम्न छुट दिएको छ। हजुरले अनेकौ सार्बजनिक ठाउमा यी मृग भेट्नु हुनेछ। यी मृगहरु घर पालुवा जनावर जस्तै हजुरलाई नजिक आउन दिन्छन। तर यी मृगहरु खाने कुराले आकर्षित हुने हुदा, आफ्नो ब्यागहरु आफु नजिकै राख्नु होला। यी मृगलाई खाना खुवाउन मनाही गरिएको छ। यी मृग यो टापुको सबै तिर डुल्ने भएता पनि धेरै जसो इचुकुशिमा श्राईनमा भेटिन्छ।
इचुकुशिमा श्राईन जानुहोस्
यो टापु सानो भएकोले पनि होला हजुरले पुरै दिनमा समुद्रको पानिको सतह घट्ने बढ्ने भएको देख्नु हुनेछ। यो कोस्टलाईनको चेन्ज साबि भन्दा राम्रो संग इचुकुशिमा श्राइनबाट देखिन्छ। छाल बढ्दा समुद्रको लेभलले यो मन्दिरको भुई छोपिन्छ। मेरो रिकमेण्डेसन मान्नु हुन्छ भने यो श्राईन हाई टाईडमा जानु होस्। हजुर यो मन्दिरको काठले बनेको भुइँमा हिड्दै गर्दा पानि को लेभल बढ्दै गरेको देखिन्छ। पनि जति जति माथि आउछ हजुरलाई त्यो पुरै मन्दिरनै पानीमा तैरिएको जस्तो अनुभब हुनेछ। यो मन्दिर तिन देबीको उपमाको लागि बनाइएको हो। यी देबीहरुलाई बोधीसत्व काननोंक रुप पनि मानिन्छ। यो मन्दिरको अनौठो बातावरणमा रमाउनुहोस अनि समुद्रमाथि हिडेको अनुभब गर्नुहोस्।
माउन्ट मिसेन मियाजिमा टापुको सबै भन्दा अग्लो स्थान हो। यहाँ पुग्ने थुप्रै तरिका छन्। मियाजिमा टापुमा एक दिन पुरै बिताउनेहरुको लागि यो पहाडमा पुग्न अनेकौ हाईकिङ्ग रुट छन्। हिडेर टुप्पोमा पुग्न दुई घण्टा जति लाग्छ। समिटमा पुग्ने अर्को तरिका भनेको रोपवेबाट हो। रोपवेमा जादा हजुरले मिसेन पहाडमा रहेको घना जंगल देख्न सक्नु हुनेछ। हाईकिङ्ग र रोपवेको बाटो दुवै ईचुकुशिमा श्राइनबाट नजिक छ। समिटमा बेसमा भएको दाईशो मन्दिरका थुप्रै बिल्डिंग छन्। पहाडको टुप्पो बाट पर्यटकले सेतो इन्ल्याण्ड समुद्रको ३६० डिग्रिको दृष्याबलोकन गर्न सक्नु हुनेछ।
मियाजिमा पब्लिक इक्वेरियम
टापुबाट एकछिन बिश्राम लिनुहोस् र मियाजिमा एक्वेरियममा रहेको समुद्री जनावरहरु हेर्नुहोस्। यो एक्वेरियम इचुकुशिमा श्राईन नजिकनै छ। यो एक्वेरियममा केहि अनौठा ईण्टेरिअर छन्। यसको इण्टेरिअर इचुकुशिमा श्राईनकै मोडल जसरि बनाईएको छ। यहाँ देखिने केहि प्राणिहरुमा पिरन्हा, होर्ससु क्रयाब, पेंगिनहरु छन्। यो एक्वेरिअम भित्र छिरेर हजुरले गर्मि छल्न सक्नु हुने छ।
रिक्सा रेन्ट लिनुहोस्
यदि हजुर आफ्नो दिनभरिको मियाजीमा ट्रीपले थकित हुनु भयो भने रिक्सा चढ्नु होस्। रिक्सा जापानको अनेकौ सहरमा भेट्न सकिन्छ। यो पर्यटकहरुको लागि भनेर चलाईएको हो। यहाँ पनि हजुरले रिक्सा रेन्ट गर्न सक्नु हुनेछ। तर रिक्सा अलि महँगो पर्दछ। ४५०० येनमा ३० मिनेटको रिक्सा राईड पहिले नै रिजर्ब गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी आफुले चाहेको रुट पनि फिक्स गर्न सकिन्छ। मलाई चाही यो राइड अलि महँगो लागेकोले गरिन। यदि हजुरलाई पनि पैसा बचाउनु छ भने हिडेर नै घुम्न सक्नु हुन्छ।
मैले सुरुमा भनेको मियाजिमा तोरीको रेनोभेसनले आफ्नो मियाजिमाको यात्रा नरोक्नु होस्। यहाँ घुम्न र गर्न लायक थुप्रै ठाउ र एक्टिभिटि छन। म त ति मृगलाई भेट्न भएपनि फेरी एक चोटी मियाजिमा जानेछु।